Shacabka Soomaaliland oo safaf kaga jira goobaha codbixinta | KEYDMEDIA ONLINE
Shacabka Soomaaliland oo safaf kaga jira goobaha codbixinta
Shacabka Soomaaliland ayaa saaka oo ay taariikhdu tahay 31-ka bisha May waxay safaf dhaadheer ugu jiraan in ay codkooda dhiibtaan kana qayb galaan doorashada isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka.
HARGEYSA, Soomaaliland - In ka badan hal Milyan oo muwaadiniin reer Somaliland ah ayaa la filayaa in ay saaka u soo baxaan cod bixinta doorashadii Baarlamaaniga ahayd ee ugu horreysay ee Soomaaliland ka dhacda tan iyo 2005, iyadoo 246 musharrax ay u tartamayaan 82 kursi.
Codbixiyeyaasha ayaa sidoo kale la filayaa inay doortaan 249 kursi oo Wakiillada Goloyaasha Degaanka ah, isla-markaan ay ku tartamayaan 747 Musharax, oo ka kala socda dhamaan lixda gobol ee Soomaaliland, kuwaas oo kala ah Maroodi-jeex, Togdheer, Sanaag, Saaxil, Sool iyo Awdal.
Xildhibaanada hadda jooga waxaa la soo doortay 16 sano ka hor waxayna ka gudbeen muddadii sharcigu u igmaday oo ahayd 10 sano, waxaa la filayaa in 1.065,847 milyan oo muwaadiniin ah ay dhiibtaan codadkooda doorashadii afaraad tan iyo 2005, halka goobaha codbixintu ay gaarayaan 2,709.
Waxaa goobjoog ah kormeerayaal ka socda dalalka gobolka, iyo daneeyayaasha kale ee caalamiga ah, waxaana kormeerka xubin ka ah Madaxweynihii hore ee wadanka dhaca Galbeedka Afrika ee Sierra Leone, Ernest Koroma.
Si loo yareeyo shakiga loona hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka, isla-maarkaana looga fogaado in hal ruux uu dhowr jeer codeeyo, Guddiga Doorashooyinka ayaa qorsheeyay in markii labaad, goobaha codbixinta la geeyo Kaamirooyinka aqoonsanaya indha, ‘The Iris system’ taas oo kordhin karta kalsoonida.
Doorashadii Madaxtinimada ee dhacday 2017, waxaa hareeyay xasarado, mucaaradka ayaana tilmaamay in si qaldan loo maamulay natiijooyinka doorashadii uu ku soo baxay Madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi, ahna murrashaxa Xisbiga Kulmiye, kaas oo tartan adag kala kulmay Cabdiraxmaan Cirro, oo ah hoggaamiyaha Xisbiga Waddani.
UCID, waa xisbiga ugu da'da weyn Somaliland, wuxuu ka mid yahay saddexda xisbi siyaasadeed ee ku tartamaya doorashada 2021.
Natiijooyinka doorashooyinka Soomaaliland kala soco bogga wararka Keydmedia Online.